कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति : डेल्टाबाट उत्पत्ति भएको ‘डेल्टा प्लस’ कति खतरनाक? – Health Post Nepal
कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति : डेल्टाबाट उत्पत्ति भएको ‘डेल्टा प्लस’ कति खतरनाक?
२०७८ असार १ गते १०:४७
भारतमा सुरुमा फेला परेको कोरोना भाइरसको भेरियन्ट डेल्टाबाट डेल्टा प्लस नामक नयाँ भेरियन्ट उत्पत्ति भएको छ। यसले पुन: भारतमा चिन्ता बढाएको छ। डेल्टाले भारतमा उग्ररुप नै लिएको थियो।
तर, वैज्ञानिकहरु डेल्टा प्लस भेरियन्टलाई लिएर खासै चिन्तामा छैनन्। वैज्ञानिकले अहिले नै यो भेरियन्टलाई लिएर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उनीहरुले अहिले देशमा यसका थोरै केशहरुमात्र फेला परेको बताएका छन्।
काउन्सिल अफ साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च-इन्स्टिच्युट अफ जिनोमिक्स एण्ड एन्टिग्रेटिभ बायोलोजी (सिएसआइआर-आइजिआइबी) का निर्देशक डा. अनुराग अग्रवालले भने, ‘अहिले नै भाइरसलाई लिएर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। खोपको पूरा मात्रा लगाएकाहरुको रक्त प्लाज्मामा यस भाइरसको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले यो पत्ता लगाउने छ कि, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई यसले कमजोर बनाउन सक्छ कि सक्दैन।’
दिल्लीस्थित सिएसआइआर-आइजिआइबी का वैज्ञानिक विनोद स्कारियोले K417N उत्परिवर्तन भएर B 1.617.2 प्रकार बनेको र यसलाई AY.1 नामबाट पनि चिनिने बताए। उनले यो परिवर्तन सार्स सिओभी-२ को स्पाइक प्रोटिन मा भएको बताए। उनले यो भाइरस मानव कोसिकाको भित्र गएर संक्रमण गराउन मद्दत गराउने बताए।
यता, रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेषज्ञ विनीता बलले भाइरसको नयाँ प्रकारले ‘एन्टिबडी ककटेल’ को प्रयोगमा असर पुर्याउने देखिएपनि यसको मतलब भाइरस बढी संक्रामक भएको बिरामी अझै घातक हुने भन्ने नरहेको बताइन्।
डेल्टा प्लस भेरियन्ट डेल्टा अर्थात B 1.617.2 बाट उत्पत्ति भएको बताइएको छ। तर, यो भेरियन्ट कति घातक बन्नसक्छ भन्ने अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन। यसमाथि भारतीय वैज्ञानिकहरुले अनुसन्धान गरिरहेका छन्।